cusmaan | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 66
Wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Liibiya Mucammar Al-Qadaafi Oo sheegay inuu u tartamayo madaxtinimada wadankaas.
Seyful Islaam Al-Qadaafi oo kamid ah wiilasha uu dhalay kaligii taliyihii hore ee Liibiya Mucammar Al-Qadaafi ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay inuu u tartamayo doorashooyinka madaxtinimada wadanka Liibiya. Ayman Buuraas oo ku hadlay magaca Seyful Islaam, isagoo jooga wadanka Tuunis ayaa sheegay in ina Qadaafi uu yahay qof xur ah, islamarkaana ku sugan gudaha dalka Liibiya, uuna go’aansaday ...	Read More »
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Degso Dhuuxa wareysiyada 19-03-2018	Read More »
Hogaanka Guud ee Al-Qaacida oo ka hadlay Loolanka Bariga Africa ka socoda.
Mu’assasada warbaahineed ee As-saxaab ayaa baahisay kaliamd muhiim ah oo uu kaga hadlayo hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta Alqaacida loolanka iyo siraaca taariikhiga ah ee geeska Africa ku dhexmaraya islaamka iyo gaalada. Kalimadan oo ah qeybata tobnaan ee silsiladda taxanaha ee uu wado sheekha, looguna magacday guga Islaamka, ayuu sheekhu si faafahsan wuxuu ugu milicsanayaa taariikhda iyo loolanka uu marti geliyay ...	Read More »
Dagaal U dhexeeya Malleeshiyaad Beeleed iyo Suufi Oo ka dhacay Galgaduud.
War kusoo dhacay warqabadka Idaacadda islaamiga ee Alfurqaan ayaa xaqiijinaya in deegaan katirsan gobolka Galgaduud uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya malleeshiyaad beeleed iyo kuwa suufi ah. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Miir-cade oo qiyaastii 45 Km galbeed kaga beegan magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Inkastoo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay dagaalkan ...	Read More »
Butin Oo markii 4-aad noqday Madaxweynaha Ruushka.
Tirin horudhac ah oo lagu sameeyey codadka doorashooyinka dalka Ruushka ayaa muujineysa in Faladamir Butin uu ku guuleystay markii 4-aad inuu noqdo madaxweynaha Ruushka. Faladamir oo horay loo sahdaalinayay inuu ku guuleysan doono doorashooyinka ayaa helay codad gaaraya illaa iyo 70%, waana natiijo horey loo filayay. Mucaaradka wadanka Ruushka ayaa ku eedayay gudiga doorashooyinka inuu isdaba marin ballaaran ku sameeyey ...	Read More »
Dhagayso: Mas’uul sare oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo Faafaahin ka bixiyay Dagaal shalay ka dhacay Hiiraan.
Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee Hiiraan oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda ku hadasha Afka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee Andalus ayaa faafahin ka bixiyay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada Maxaas ee gobolkaas. Sheekha ayaa sheegay in dagaalkaas ay la galeen ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah iyo ciidamo katirsan dowladda federaalka, waxaana uu meesha ka saaray warar ...	Read More »
DEG-DEG: Duqeyn Hadda ku socota Saldhiga Amabreeso ee Ciidamada Shisheeyaha.
War hadda kusoo dhacay warqabadka Idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan ayaa sheegaya in duqeyn xoogan ay ku socoto saldhig ciidamada Shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka Ambareeso ee duleedka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose. Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab qeybta jugta culus ayaa lagu soo waramayaa iney madaafiic ku garaacayaan garoon cusub oo ay Shisheeyuhu ka dhisayaan duleedka deegaanka Ambareeso. Lama oga ...	Read More »
Daawo:Jawaari oo Cadeeyey inuu khilaaf kala dhexeeyo Xassan Cali Kheyre, Ra’iisul wasaaraha dowladda.
Gudoomiyaha Baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay mooshinka laga keenay iyo khilaafka hadda ka dhex jira mas’uuliyiinta dowladda. Jawaari wuxuu sheegay in mooshinka isaga ka dhanka ah uu wado ra’iisul wasaaraha dowladda Xassan Cali Kheyre, iyadoo ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye. Wuxuu sheegay Jawaari iyadoo ay naxdin iyo wal wal ka muuqato ...	Read More »
Howlgal Kaligii Duulnimo oo Lagu dilay Askar Yahuud ah oo Ka dhacay Filastiin.
Kaligii duule muslim ah ayaa weerar ka fuliyay deegaannada dhulka Filastiin ee ku jira gumeysiga Yahuudda, waxaana uu dilay tiro kamid ah askarta Yahuudda, isagoona dhaawacay kuwa kale. Howlgalka oo ahaa gaari jiirsiin wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada Janiin ee daanta galbeed, waxaana fuliyay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Calaa Qabhaa oo 26 jir ah. Ugu yaraan labo askari ...	Read More »
Dhagayso Warka Subaxnimo 29-05-1439
Dhagayso Wararka kabaxa Idaacadda islaamiga ee Alfurqaan, si aad u hesho xaqiiqda caalamka iyo dalka. Halkan ka dhagayso War Subax 17 03 2018.lite	Read More »
Page 66 of 163« First...405060«6465666768	»	708090...Last »